नेपालमा सोसल मिडिया र ब्लगमा भैरहेका केहि घटनाहरुलाइ साइबर अपराधको संज्ञा दिन सकिन्छ-चन्दन गुप्ता - MeroReport
नेपालमा सोसल मिडिया र ब्लगमा भैरहेका केहि घटनाहरुलाइ साइबर अपराधको संज्ञा दिन सकिन्छ-चन्दन गुप्ता
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्नातकोतर तहमा अध्ययनरत चन्दन गुप्ता रिसर्चमा अत्याधिक रुची राख्छन् । कम्प्युटर इन्जिनियर समेत रहेका चन्दन आफुलाइ स्वतन्त्र तथा खुल्ला श्रोत सफ्टवेयर (Free and Open Source Software) को अभियन्ताका रुपमा चिनाउन चाहन्छन् तर उनको परिचय यतिमा सिमित भने छैन । उनी सामाजिक संजाल ट्विटरमा समेत उत्तिकै सक्रिय छन भने प्रविधिका बारेमा लेखिएको उनको ब्लग www.linuxcandy.com थोरै मध्येको नेपाली प्राविधिक ब्लगमा पर्छ । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपटक हामीले उनै चन्दनसंग प्राविधिक ब्लगिङ र साइवर अपराधका सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ प्रकाश लामिछानेले चन्दन गुप्तासंग गरेको कुराकानी :
दुइ वर्ष पुग्न लाग्यो। २१-मार्च-२०१३ मा ब्लगको दोश्रो जन्मदिन मनाँउदैछु।
प्राविधिक ब्लगहरु र त्यसमा पनि Linux/FOSS समबन्धित ब्लगहरु धरै भएपनि राम्रो प्रस्तुतिकरण भएको ब्लगहरु कमै पाइने हुँदा आफुलाइ परेका समस्या र प्राय: धेरै खोजिने स-साना प्राविधिक समस्याहरु कसरी हल गर्ने लगायतका कुरालाइ लिएर सरल भाषामा सबैले बुझ्ने गरि लेख्छु। मेरो ब्लगिङको मुख्य उद्देश्य नै अरु ब्लगहरुले लेख्न छुटाएका अथवा सहज रुपमा नलेखेका कुराहरुलाइ लेखेर प्रविधिका ज्ञान नभएकाहरुले पनि बुझ्ने गरि एउटा ब्लगको स्थापना गर्नु हो ।
म सधै Linux र FOSS (Free and Open Source Software) का बारेमा मात्र लेख्छु। प्राय: प्राविधिक कुराहरु, हाउ-टु र कहिले काहि FOSS/Linux का समाचारहरु ।
तपाइ त बिशुद्द एउटा प्रोगामिङ तथा डाटा इन्जिनियर, सोसल मिडियामा आफुलाइ कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ ब्लगरका रुपमा या इन्जिनियरका रुपमा?
म पहिला एउटा इन्जिनियर हुँ त्यसपछि ब्लगर।
आफ्नो ब्लगमा प्रविधिका कुराहरु लेख्ने गरेपनि अरु सोसल नेटवर्किङ साइटहरुमा तपाइ जुनसुकै बिषयका बहसहरुमा समेत सहभागी भइरहनुहुन्छ, नेपाली ब्लग क्षेत्रलाइ कसरी नियाल्नुभएको छ?
सुरुमा त म एक नेपाली नागरिक हुँ त्यसपछि बल्ल इन्जिनियर । देश र समाजमा हुने कुराहरुको जानकारी राख्न म पनि रुचाउँछु त्यसैले म मेरो विचार राख्न पछि पर्दिन। बहसहरुमा सहभागी भएर आफुलाइ कतिको जानकारी छ भन्ने थाहा हुन्छ र अरुलाइ थाहा भएका कुराहरु पनि जानिन्छ। यसरी बहसमा सामेल हुँदा नेपाली ब्लग क्षेत्र फस्टाउदै गरेको देख्छु र ब्लगहरुको बढ्दो सँख्या देख्दा खुशी लाग्छ। प्राविधिक, राजनैतिक, समाजिक, ब्यकतिगत, कथा, कविता, नाटक इत्यादि हरेक क्षेत्रका ब्लगहरु लेखिन्छन। ब्लगको संख्या धेरै भएपनि गतिलो ब्लगहरुको संख्याको भने कमि छ जस्तो लग्छ।
मेरो ब्लग विश्वको टप-२० लिनक्स् ब्लगहरुको सुचिमा परेको कुरा सम्झिँदा औधी खुशी लाग्छ। यस बाहेक यो अन्तरवार्ता पनि मेरो लागि संम्झनलायक हुनेछ ।
तपाइ आफुलाइ साइवर क्राइम कन्सलट्यान्टका रुपमा पनि चिनाउन चाहनुहुन्छ, नेपालमा सोसल मिडिया र ब्लगमा भइरहेका संचारहरुमा अभिब्यक्तिको विविधता धेरै छ कि यस मार्फत साइबर अपराध पनि भैरहेको छ?
अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतासंगै नेपालमा साइबर क्राइमहरु पनि भैरहेका छन्। वेबसाइटहरु ह्याक गरिएका कुराहरु सबैले जानेकै कुरा हो । नेपाली सोसल मिडिया र ब्लगमा भैरहेका केहि घटनाहरुलाइ साइबर अपराधको संज्ञा दिन सकिन्छ। साइबर अपराध के हो र कस्तो कुरालाइ साइबर अपराध भन्ने कुरो पनि आउनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता पाएका बुंदाहरुलाइ हेर्ने हो भने सोसल मिडिया मार्फत साइबर अपराधहरु समेत भएका भन्न मिल्ने केहि घटनाहरु छन्।
विश्वका अरु मुलुकमा भइरहेका साइवर अपराध र नेपालमा भएका साइवर अपराधविच समानता छ कि फरक छ?
नेपालमा भएका साइबर अपराधको बारेमा कुरा गर्दा सोसल मिडिया मार्फत भएका केहि नमिठा बहस, कपिराइटको विवाद, प्लेगियारिज्मका केहि मुद्दा र वेबसाइटहरु ह्याक भएको घटनाहरु उदाहरणका रुपमा दिन सकिन्छ। विश्वको कुरा गर्ने हो भने बैंक लुट्ने, ठुला-ठुला सेलिब्रिटिहरुका ट्विटर र फेसबुक खाताको पासवर्डहरु चोर्ने, इमेल र सोसल मिडिया मार्फत दिइने मृत्यु धम्कि, अवैध अनलाइ व्यापार र अरु धेरै उदाहरणहरु दिन सकिन्छ जुन नेपालमा भएको छैन या भनौ सुनिएको छैन।
इनटरनेट आफैमा एउटा विश्व हो । एउटा छुट्टै मुलुक हो । अलगअलग देश अनुसार साइवर अपराधको परिभाषालाइ फरक पार्नुपर्छ भन्नेमा मेरो विचार नकारात्मक छ। अपराध भनेको अपराध हो । कसैले नेपालमा बसेर अमेरिकाको कुनै ब्यक्तिको फेसबुक ट्विटर इमेल इत्यादी खाताको पासवर्ड चोर्न सक्छ। यस्तो साइबर अपराधलाइ नेपालको कानुन लगाउने कि अमेरिकाको भन्ने हुनु हुदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समान हुनुपर्छ।
हामीकहाँ सोसल मिडियाका प्रयोगकर्ताहरु बिच 'फेक आइडी'को निकै कुरा हुन्छ, फेक आइडी बनाउनु साइवर अपराध हो कि हैन?
फेक आइडी, यदि अरुको नाम र पहिचान लिएर बनाइएको हो भने त्यो पक्कै पनि साइबर अपराधमा पर्छ। भारतमा फेक आइडि बनाउने ब्यक्ति प्रकाउ भएको उदाहरण म यहाँ दिन चाहन्छु त्यसका लागि यो लिँक http://punjabnewsline.com/content/man-arrested-creating-fake-facebook-profile-woman/33191 समेत हेर्न सक्नुहुन्छ।
साइवर अपराधबाट जोगिन न्यु मिडिया तथा सोसल मिडियाका प्रयोगकर्तालाइ यहाँका केही टिप्स?
आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु भन्दा पहिले र कुनै बहसमा सहभागी हुनु अगाडी एउटा कुराको ध्यान दिन म सबैजना लाइ सुझाव दिन्छु । सुझाव के भनेँ - “You can move your hands freely but only until it doesn’t come to my nose.” साइवर अपराध भनेको के हो र कस्ता कुराहरु साइबर अपराध भित्र पर्छन् भन्ने कुराको जानकारी सबैले राख्नु पर्छ ।
मानिसहरु अचेल सामाजिक संजालमा हुने बहसमा निकै सहभागी भैरहेका हुन्छन, किन यस्तो भएको होला, बन्द कोठामा बसेर भर्चुअल रुपमा संचार गर्दा आनन्द आउने हुनाले या आफ्ना कुराहरु अरुमाझ पुर्याउन न्यु मिडियाले हरेक ब्यक्तिलाइ अलग अलग प्लेटफर्म दिएका हुनाले?
दुबै कुरा सहि हो। भर्चुअल रुपमा संचार गर्दाको आनन्दलाइ अनेक अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ र यो सत्य हो भन्ने मेरो मान्यता छ। घरमा बसेर आफ्ना कुराहरु अरुमाझ सजिलै पुर्याउनु देखि लिएर आफन्त संग कुराकानी र नयां साथी बनाउन सजिलो हुनाले गर्दा पनि मानिसहरु अचेल सामाजिक संजालमा हुने बहसमा सहभागी भैरहेको जस्तो लाग्छ। यसका साथै अरु कारणहरु पनि छन्। बहसमा सहभागी हुनाले आफुले जानेका कुरा बाँड्न पाइन्छ भने अरुले थाहा पाएका कुराहरु सिक्न पाइन्छ। आफ्नो ब्यक्तिगत पहुँच नभएका ठुला ब्यक्तित्वहरुसंग बहस गर्न पाउनु पनि अर्को कारण हो । केहि नेता र सेलिब्रेटीहरुको उदाहरण नेपाली ट्विटर समाजमै छ । सोसल मिडया मार्फत कुराहरु राख्न सजिलो छ र कहिल्ये राम्ररी बोल्न नसक्ने र आफ्नो कुरा राख्न लाज मान्नेहरु पनि समाजिक संजालको सहयता लिएर बहसमा सहभागी भैरहेका हुन्छन।
म नकारात्मक पक्ष तिर प्राय: हेर्दिन त्यसैले सोसिल मिडियामा भइरहेको बहसले उब्जाएको सकारात्मक कुरा गर्नुपर्दा मलाइ हालैमा भैरहेको OccupyBaluwatar अभियान सम्झ्नछु। सोसिल मिडियाले गर्दा यो अभियानलाइ निकै बलियो पारेको छ। ट्विटर र फेसबुक नचलाएको भए मलाइ यसबारे थाहा हुदैनथ्यो जस्तो लाग्छ। हामी कस्ता बहसमा आफैलाइ संलग्न गर्छौ भन्नेमा पनि भर पर्छ । बहसले कुनै रुपमा कसैको बहस गर्ने क्षमतालाइ बलियो पारेको हुन्छ भने कसैको ज्ञानको दायरालाइ फराकिलो पारिरहेको हुन्छ। कतिपय बहसले हाम्रो ब्यक्तित्व झल्काउछ भने कसैलाइ आफ्नो ज्ञानको प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि मिलेको छ ।
केहि महिना अगाडी उबन्टु लिनक्सको नयां संस्करण आउदा मैले यसबारे केहि हाउ-टु'हरु लेखेको थिए, जुन अहिलेसम्म पनि राम्रो संख्यामा हेरिने गर्छन। त्यसमध्य केहि ब्लगपोस्टले ५००० हिट पनि नाघेको छ ।
विश्वभरी लिनक्स बारे ब्लगहरु धेरै छन्। तर गतिलो र सजिले बुझिने भाषामा लेखिएका ब्लग पोस्टहरु कम जस्तो लाग्छ। सरलता र सटिकता अति आवश्यक छ। निरन्तर रुपमा नयाँ पोस्टहरु लेखिराख्नु र नयाँ कनटेन्टहरु ब्लगका दर्शक माझ ल्याउनुले ब्लगको ध्यान तान्छ जस्तो लाग्छ।
प्राविधिक क्षेत्रमा लागेकाहरुको प्रविधि प्रतिको बुझाइ धेरै भयो र प्रविधि प्रति नलागेकाहरुको बुझाइ अलि कम । यि दुइ वर्गका मानिसहरुको बिचको दुरी ठुलो छ जस्तो लाग्छ। जान्नेहरुले ब्लग पोस्ट लेखिहाल्न मन पराउदैनन् र अर्को वर्गले सक्दैनन् । थप कारण भन्नुपर्दा, प्रविधि समबन्धित ब्लगहरु धेरै छन् र नयाँ ब्लगहरुले सफलता पाउनका लागि धेरै मेहनेत गर्नु पर्ने भएकोले आटि हाल्दैनन्।
म अरुको ब्लग निरन्तर रुपमा हेरिरहेको हुन्छु। आफुलाइ मनपरेका हरेक ब्लगको इमेल सब्सक्रिपसन लिएको छु। केहि नयाँ ब्लगपोस्ट आउदा इमेलमा आउँछ अनि खोलेर पढिहाल्छु।
नेपाली टेक्निकल ब्लगको नाम लिनु पर्दा मुकेश चापागाइको ब्लग http://blog.chapagain.com.np/ मन पर्छ।
सामाजिक संजालका धेरै महत्व छन्। समाजिक संजाल गुरुहरुलाइ सोध्दा अलि राम्रो उत्तर आउथ्यो होला । मेरो ब्यक्तिगत विचार भन्नुप्रदा यसको मुख्य महत्व भनेको सुचना सहज रुपमा उपलब्ध हुनु हो ।
तपाइको विचारमा सामाजिक संजाल के हो? सुचना र समाचार आदानप्रदान गर्ने थलो, बिचारहरु अभिब्यक्त गर्ने मञ्च, विज्ञापनको माध्यम या अल्टरनेटिभ मिडिया, के हो?
सबै। समाजिक संजालहरुका आ-आफ्नै विशेषताहरु छन्। ट्विटरको कुरा गर्ने हो भने सुचना र समाचार आदानप्रदान धेरै हुने गर्छन् । बिचारहरुको अभिब्यक्ति ट्विटर, फेसबुक र गुगल प्लस लगायत हरेक संजालमा देखिन्छ भने फेसबुक प्राय: मनोरन्जनका लागि उपयोग भैरहेको देखिन्छ। विज्ञापनका लागि पनि समाजिक संजालहरु अतिउपयोगी देखिएको छ । यी सम्पुर्ण कुराहरुलाइ नियाल्दा सामाजिक संजाल नै मुख्य मिडियाको रुपमा उभिन्न सक्ने देखिन्छ र मुल मिडिया चाँहि अल्टरनेटिभ मिडिया हुदै गैरहेको जस्तो लाग्छ।
म आफुलाइ खुल्ला श्रोत सफ्टवेयरको पत्रकार भन्छु। मेरो पत्रकारिता मेरो ब्लगमा झल्किन्छ। कुनै पत्रिकाको लागि कहिल्यै लेखेको छैन र म सित पत्रकारको परिचय पत्र पनि छैन। मलाइ कसैले मेरो पत्रकारितालाइ नागरिक पत्रकारिता र मलाइ नागरिक पत्रकार भन्छ भने मेरो त्यसमा भिन्न मत आउँदैन।
मेरो विचारमा यो जरुरी छैन। यो नराम्रो हो भनेर पनि म भन्दिन। तर जब म ब्लग लेख्छु, म खुलस्त भएर लेख्छु, कुनै आचारसंहिता मेरो मस्तिष्कमा हुदैन । यसरी ब्लग लेख्दा मेरो मौलिक कला झल्किन्छ । मात्र म, मात्र मेरो लेखाइ, मेरो प्रस्तुति र मेरो विचार, मेरो शैलीमा। आचारसंहितालाइ विचार गरेर लेख्ने हो भने म आफु रहँदिन, भ्रमित हुन्छु । मेरो लेखाइमा बन्देज हुन्छ। त्यो मेरो लेखाइ मेरो नै नभएर सकिन्छ। तर यति भन्दैमा मैले जे पायो त्यहि पनि लेख्न पाउँछु भन्ने पनि होइन । त्यसका लागि बरु साइबर नियमहरु पालना हुनुपर्छ। एउटा छुट्टै आचारसंहिता नै बनाइहाल्नुपर्छ भन्नेमा मेरो मत नजाला।
टेक्निकल ब्लगरहरुको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, खुशी लाग्यो। सामाजिक, समसामयिक र राजनैतिक कुराहरुमा ब्लग लेख्नेहरुको मात्र नभएर बिभिन्न बिधाहरुमा ब्लग लेख्नेहरुको खोजी गर्नुहोस् र हरेक क्षेत्रको ब्लगहरुका मनमा भएका विचारहरु पढ्न पाइयोस भन्ने आशा लिएको छु। मेरोरिपोर्टको प्रगतिको लागि मेरो ब्यक्तिगत कामना र मलाइ "साताको ब्लगर"को लागि छान्नु भएकोमा धन्यबाद दिन चाहन्छु।
Comment by Kamal Paudyal on February 18, 2016 at 4:59pm
Comment by Lava Kafle on January 10, 2013 at 2:07pm
dear friend lovely woow
Comment by Amuna Chapagain on January 10, 2013 at 12:32pm
Comment by pawan neupane on January 9, 2013 at 5:07pm
Congratulation Chandan Ji form my (@shikaruketo) side
Comment by Pagal Basti on January 9, 2013 at 1:58pm
बधाइ छ है चन्दन ज्युलाई स्विकार होस
Comment by Equal Access on January 9, 2013 at 11:58am
Congratulations Chandan jee!
Comment by Kranti Darai on January 9, 2013 at 11:44am